အခမဲ့စစ်မှန်သော Scalper EA ၏ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex ကွက်အခမဲ့စစ်မှန်သော Scalper EA ၏
အဆိုပါထုတ်ကုန်၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အမည်တူရှိခြင်း။ အပြည့်အဝဗားရှင်းလက်ရှိတဦးတည်းမတူဘဲ နိမ့်ဆုံး volumes ကိုနှင့်အတူအရောင်းအသာ fixed တွေအများကြီး။ အဆိုပါ EA ၏စျေးကွက်အနေအထားကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးထူးခြားတဲ့ကုန်သွယ် algorithm ကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ TakeProfit နှင့် StopLoss တန်ဖိုး EA ၏အားဖြင့်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ရာထူးအမြတ်, အချိန်အားဖြင့်သို့မဟုတ် TakeProfit သို့မဟုတ် StopLoss အဆင့်ကိုရောက်ရှိပြီးနောက်ပိတ်လိုက်ရသည်။ အဆိုပါ EA ၏မ martingale ကိုအသုံးပြုသည်, မ hedging နှင့်မျှမရှုပ်ထွေး setup ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသုံးသို့မဟုတ်ငါးဒဿမသောနေရာများနှင့်အတူကုန်သွယ်တူရိယာအဘို့သင့်လျော်သည်နှင့်ကုန်သွယ်များအတွက် optimized EURUSD M15.
အခမဲ့ True Scalper EA - ထူးခြားချက်များ
ဒါဟာ 20 အချက်များထက် ပို. အများဆုံးပျံ့နှံ့အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ပေမယ့်မဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
ထိုရက်သတ္တပတ်၏အခြို့သောနေ့၌ထရေးဒင်း enabled နိုင်ပါသည်။
နိမ့်ဆုံးကနဦးအပ်ငွေ $ 50 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ EA ၏ EURUSD M15 အပေါ်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Standard နှင့် ECN အကောင့်အသစ်များ၏အပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်။
အခမဲ့ True Scalper EA - ကောင်းကျိုးများ
အနိမျ့ drawdown ။
အခမဲ့စစ်မှန်သော Scalper EA - Parameters
ကုန်သွယ် - ကုန်သွယ်ချိန်ညှိချက်များ။
မျှော - EA ၏အမိန့်မှော်နံပါတ်။
StopLoss - StopLoss တန်ဖိုး။0ဖြစ်ပါကတန်ဖိုးကို EA မှတွက်ချက်ပြီးနေရာချပေးသည်။
TakeProfit - TakeProfit တန်ဖိုးကို pips များဖြင့်ဖော်ပြသည်။0ဖြစ်ပါကတန်ဖိုးကို EA မှတွက်ချက်ပြီးနေရာချပေးသည်။
Max_Spread - ဖွင့်လှစ်ထားသည့်နေရာများအတွက်အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောပျံ့နှံ့အရွယ်အစား၊ အကယ်၍0သည်တန်ဖိုးများသည် 20 အချက်များထက်မကျော်လွန်ပါ။
Max_Lot - အများဆုံးခွင့်ပြုခဲ့တွေအများကြီးအရွယ်အစား။
TimeTrade - ကုန်သွယ်အချိန်ချိန်ညှိချက်များ။
OpenHour - ကုန်သွယ်မှုစတင်ချိန်။
OpenMinute - ကုန်သွယ်မှုစတင်ချိန်မိနစ်။
CloseHour - ကုန်ဆုံးချိန်နာရီ။
CloseMinute - ကုန်ဆုံးချိန်မိနစ်။
MarketWatch - StopLoss ကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်မပြုသည့်ပွဲစားများအတွက်၊ TakeProfit ကိုရာထူးဖွင့်ခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်ပါ။
အခမဲ့ True Scalper EA - လိုအပ်ချက်များ
အကြံပြု pair တစုံ: EURUSD.
စစ်မှန်သော Scalper EA ၏အခမဲ့